FEIHU လူပျိုဗိုင်းလိပ်တံထိန်းချုပ်ရေး Cone စက်အကွေ့အကောက်များသော - တရုတ် FEIHU လူပျိုဗိုင်းလိပ်တံထိန်းချုပ်ရေး Cone စက်ပေးသွင်းအကွေ့အကောက်များသော,စက်ရုံ -FEIHU
FEIHU လူပျိုဗိုင်းလိပ်တံထိန်းချုပ်ရေး Cone စက်အကွေ့အကောက်များသော
Cone အကွေ့အကောက်များသောစက် polyester အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောကြိုးပုံသဏ္ဍာန်အကွေ့အကောက်များသောအသုံးပြုသည်, နိုင်လွန်, သိုးမွှေးကြိုး, စစကြိုး, ဝိုင်ယာကြိုးများနှင့်များစွာသောအခြားအထူးမျှင်. Slub Catcher, စင်ကြယ်သောခရီးသွားနှင့် auto-လဆန်း device ကိုရွေးချယ်နိုင်ကြသည်.
အဆိုပါမော်ဒယ်ဓာတုဖိုင်ဘာများအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သည်, ကြိုး, ထိုကဲ့သို့သောပြည်နယ်ရှုပ်ထွေးဆလင်ဒါပိုက်အဖြစ်ကြိုး skein, ပြည်နယ်. ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားအတူစက်တွေအဖြစ်; တစ်ဦးချင်းစီဗိုင်းလိပ်တံထိန်းချုပ်မှု; ရေနံအလိုအလျှောက်ပေါ်လာ; အစွန်း device ကို; ဆန့်ကျင်- -စုပုံထား; ချိုးကြိုး၏ Auto-မှတ်တိုင်; Fixed-အရှည်ထိန်းချုပ်မှု; စူပါ feed ကိုဝါယာကြိုး; ချိန်ညှိတွေနဲ့အနှေး -starting; ချည်ခင်မြန်နှုန်းချိန်ညှိဖြစ်ပါသည်; ချည်ခင်တင်းမာမှု-controlled device ကိုများနှင့်အခြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာများ, စက်များ၏အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်.
ကုန်ပစ္စည်း နာမတျောကို Winder စက်ယန္တရား
စွမ်းအား ပေးသွင်း 380V ကို 50HZ 3PH
လွန်ခဲ့သော : လူပျိုဗိုင်းလိပ်တံထိန်းချုပ်ရေး Hanks စေရန် Cone စက်အကွေ့အကောက်များသော
နောက်တစ်ခု : နိုင်လွန်ချည်ခင်အကွေ့အကောက်များသောစက်